Usebenze njani ukuxolelwa kweGolon Sponsor?
Kwakhona indlela i-golf golf tournaments kunye nabagadi begolfu abazisebenzisa ngayo
"Ukuxhaswa kweNkxaso" ligama elisetyenzisiweyo kwiindawo ezikwintsimi yokuqhubela phambili kwegalufa yegalufa ebeka bucala ukuba igcwaliswe ngokuqonda kwenkxaso yomqhubi. Ngamanye amagama, umxhasi we-tournament uthi, "Ndifuna umdlali X, uMdlali Y kunye nomdlali weZ kumqhubi wam," kwaye abo badlali bangena nangona abazange bahlangabezane neendlela ezifanelekileyo zokufumana umdlalo.
Abaxhasi bahlawula imali enkulu ukuze bafumane amagama abo kwinkampani kwisihloko somqhudelwano.
Ukuxhaswa ngumxhasi ngenye yezinto umxhasi ofumanayo zokuchitha imali.
Iingqungquthela kwiindwendwe eziphambili zegolfu zizalise iindawo zazo ngokubambisana kweemfuno zecandelo, ngokusekelwe kwiziganeko ezinjengezikhundla zabadlali kwirejista yemali, isikhundla seqhawe elidlulileyo, imali yokufumana imali ngemali, kunye njalo njalo.
Kodwa umxhasi angafuna ukufumana i-golfer endle engazange ifaneleke ukufumana loo migaqo. Ngoba? Naliphi na isizathu sezizathu:
Mhlawumbi i-golfer ngumhlali weso sixeko apho kudlalwa khona umdlalo, kwaye ngoko ke uyathandwa kakhulu;
okanye i-golfer ingumdlali ophezulu wokudlala kwiyunivesithi yendawo;
okanye ngumqhubi wangaphambili ohlala esithandwa ngabantu abaninzi;
okanye umntu onesivumelwano kunye nomxhasi;
okanye yinkwenkwezi yodwa yeye yawa ngamaxesha anzima kwaye ilahlekelwe yimeko yayo yokutyelela, kodwa isakwazi ukudweba izihlwele.
Kungakhathaliseki isizathu, umxhasi ufuna i-Player X entsimini, kwaye ukuxhaswa kweempazamo kunika ukuba kuxhaswe amandla okongeza abadlali kulo mqhudelwano.
Ngaba ngokwenene uMniki-mali uyenzela ukhetho?
Ithi iToyota ngumxhasi wecandelo lomqhubi we-LPGA - i-LPGA Toyota Milwaukee Open, masibize. Ngaba abaphathi beToyota baqhuba iintlanganiso zokugqiba ukuba zeziphi iigalufu eziya kufumana ukuxolelwa kwezixhasi?
Mhlawumbi - kodwa mhlawumbi akunjalo. Umlawuli wezokutyelela ngokuqhelekileyo nguye owenza izigqibo malunga nobani abazisebenzisayo.
Kodwa abo baxolelwe baya kubagolisa umlawuli wezokutyelela uzive uncedo kakhulu kulo mqhudelwano (ngokuvelisa umdla wobumnandi kunye nokuxhaswa kweendaba, umzekelo), ngaloo ndlela uzuze umxhaswa ngumxholo.
Ukuxhaswa kweeNgxowa-mboleko phakathi kweTyelelo
Izikhokelo zokusebenzisa izixoleliso zabaxhasi - zingaphi iintlawulo zokufumana umqhudelwano, ziziphi iintlobo zabadlali abafanelekile ukufumana ukukhululwa okunjalo, njalo njalo-bahluka kwi-tour yeprojekthi.
Akukho siqinisekiso sokuba umqhubi uya kunika nayiphi na imbuyekezo yokuxhaswa. Kodwa iindawo ezininzi zokutyelela zivumela abanye abaxhasi bemali kwiikholeji.
Ukuxhaswa koMxhasi kungaphinda kuqhutywe kwiNdwendwe efanayo
Ngaphandle kweso khenketho enye, ukusetyenziswa kwezihlomelo zexhasi kungahluka. Masisebenzise iPGA Tour njengomzekelo. Iziganeko zeTek Tour "eziqhelekileyo" - ezo ezingenayo i-majors okanye i-WGC tournaments okanye ii-playoffs ze-FedEx - zivunyelwe ukunika izikhululo ezi-8 zezimali. I-tourEx ye-FedEx ekhethiweyo ayinikezeli nanye. Iimbalo ezine zineemithetho yazo yokunikezela ukuxolelwa, kunye ne-PGA Tour ayinakho ulawulo phezu kwayo (i-majors iyonke ibanjwe yiminye imibutho).
Umzekelo: I-PGA Tour Sponsor Imigaqo yokuXhoxiswa
Masinamathele kwi-PGA Tour malunga nemizekelo ethile yemigaqo-nkqubo enxulumene nokuxolelwa kwezixhasi.
Cinga "umgangatho oqhelekileyo," umcimbi we-PGA Tour ogcweleyo, uthi, i-Honda Classic okanye i-Texas Open. Nazi izikhokelo zePGA Tour for the use of exemption exemptions by these events:
I-tournament inokunikezela ngokukhululeka kwezihlomelo ezisibhozo (abaxhamli bafanelekile ngokukhawuleza njengoko kuthiwa abaxhamli abaneempilo banokukhubazeka kwezero okanye ngaphantsi).
Umqhudelwano kufuneka ukhange uluhlu lwabadlali abagqibe u-2-25 ngonyaka we-Web.com Uhlobo lwemali yokutyelela i-Web.com (ixesha eliqhelekileyo elihlangeneyo kunye neyokugqibela). Ukuba ngaba kukho nawuphi na abo badlali abangekho entsimini, ubuncinane ubuncinane bokuxhaswa kwemali kufuneka baye kubadlali.
Ubuncinane ubuncinane bokuxhaswa kwezixhaswa zixhasayo kufuneka zisetyenziswe kumalungu ePGA Tour abangenjalo kwintsimi.
Njengoko uyakubona, imicimbi ye Tour PGA ayinakho ngokupheleleyo ekusebenziseni ukukhululwa kwayo. Kukho izikhokelo ezimele zilandelwe.
Yiyinyani yonke iholide. Umcimbi othi "umgangatho" we-LPGA Tour, umzekelo, unokunika kuphela ukuxolelwa kwezimbini kuphela.
Abadlali beGolfers bafumana njani ukuxhaswa kweeNkxaso?
Ukutyelela ngokuqhelekileyo kufaka umda kwinani labaxhasi beemfuno zegolfu abanokumkela kunoma yimuphi unyaka onikeziweyo, kodwa kwakhona, le nto yinto ehluke ngotyelelo. Kwi-PGA Tour, amalungu e-PGA Tour angathatha inani elingenamkhawulo lokuxolelwa kwezixhasi; Amalungu e-non-PGA Tour angathatha ubuninzi bosixhenxe.
Abadlali abadinga ukuxolelwa ngokuxhaswa ngabaxhasi babhala ngokubhalela abalawuli abacelayo, kwaye ke banethemba lokulungileyo.
Eyaziwayo Njengaye : Akuqhelekanga ukubona ukuxhaswa kwemali ebizwa ngokuba ngumxhasi, umxhasi wokumema okanye uxhaso ngaphandle. Upelo lweelwimi lungahluka kancinci, kwakhona. Ngamanye amaxesha kubhalwe "ukukhululwa komxhasi" okanye "ukuxhaswa ngabaxhasi," apho "umxhasi" unikwe impahla okanye ubuninzi.
Buyela kwiGlosari yeGolf okanye i-Golf FAQs index
Ngama-Masters ka-1997: i-Tiger Woods iwina uMongameli wayo wokuqala
Ukuhamba kweNiagara: Ukulungelelaniswa kweNtlalo
Ukuba Ihlabathi Liliyimizi ...
I-Fei Cheng Wu Rao: I-China Hotestest Dating Show
Amaqiniso Ngomlawuli waseRoma uTibheriyo
Uhlobo Luni Lokuguquguquka Kwabantu?
I-X Factor USA I-Top 12 ye-Finalists Season 1
Idizayini yasekhaya yaseFlorida yenziwe nguTylor and Taylor